तपाईको राशी कुन हो ? धनु, कन्या र वृश्चिक राशीका व्यक्तिले नछुटाई पढ्नुहोला - Naya Pusta
तपाईको राशी कुन हो ? धनु, कन्या र वृश्चिक राशीका व्यक्तिले नछुटाई पढ्नुहोला
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख ४, बुधबार २१:३२
राशिअनुसार मानिसको स्वभाव पनि फरक हुने विश्वास गरिन्छ । ज्योतिषशास्त्रको मान्यताअनुसार राशिकै आधारमा व्यक्तिको स्वभावको मूल्याङ्कन र भविश्य निर्धारण हुन्छ । राशिको स्वभावका आधारमा सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । कतिपयलाई त कोतुहुल्ता होला कुन राशिसंग बिबाह गर्दा राम्रो होला भन्ने कुरा ।
यो पनि पढ्नुहोस् : झाडुलाई सही तरिकाले राख्नुहोस्, नत्र निम्तिन सक्छ गरीबी
चौधरी ग्रुपको प्रवेशद्धार नजिकै बम विष्फोट
यी ७ राशीका लागि निकै राम्रो छ आजको दिन, हेर्नुहोस् आजको राशिफल
शास्त्र भन्छ, साँझको समयमा कहिलै नगर्नुहोस् यी काम, मानिदैन् शुभ